Maka: ujongano lomsebenzisi | Martech Zone
Maka: ujongano lomsebenzisi
NgoMvulo, Februwari 15, 2021 NgoMvulo, Februwari 15, 2021 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndigqibe uphando kwi-intanethi kwaye yayingengomsebenzi… yayintle kwaye ilula. Ndijonge umboneleli kwaye yayiyifomathi yohlobo. Uhlobo lwentlobo lweza ngenxa yokuba abasunguli befuna ukutshintsha indlela abantu abaphendula ngayo imibuzo kwizikrini ngokwenza ukuba inkqubo ibenabantu ngakumbi kwaye ibandakanyeke ngakumbi. Kwaye kuyasebenza. Masijongane nayo… sibetha ifom kwi-intanethi kwaye ngamava amabi. Ukuqinisekiswa kuhlala kuhlala kunjalo
NgoLwesithathu, Julayi 18, 2018 NgoLwesibini, Julayi 17, 2018 Douglas Karr
Namhlanje, ndifake i-Adobe XD, isisombululo se-UX / UI seAdobe sokukhuphela iwebhusayithi, usetyenziso lwewebhu, kunye nokusetyenziswa kweselfowuni. I-Adobe XD yenza ukuba abasebenzisi batshintshe ukusuka kwiifayile zecingo ezingashukumiyo ukuya kwiiprototypes ezisebenzayo ngonqakrazo olunye. Unokwenza utshintsho kuyilo lwakho kwaye ubone uhlaziyo lweprototype ngokuzenzekelayo- akukho kungqamanisa okufunekayo. Kwaye unokujonga kwangaphambili iiprototypes zakho, ezigqityiweyo ngotshintsho kwizixhobo ze-iOS kunye ne-Android, emva koko wabelane ngeqela lakho ngengxelo ekhawulezayo. Iimpawu zeAdobe